Afrika : Dobo Vaovao Anovozan’ny Fampitam-Baovao Frantsay (Trondro Vaovao)? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Septambra 2014 6:16 GMT
Bangui, Repoblikan'i Afrikafovoany. Mbola mitazona ny vahana ananany ao amin'ireo nozanahan'ny Frantsay taloha eto Afrika ny teny frantsay. Sary nosintonina tamin'ny Wikimedia Commons.
Nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety nomanina tao Paris, nanambara ny filohan'ny Canal+ , Bertrant Méheut, fa hanokatra fantsona fialam-boly vaovao natokana ho an'i Afrika miteny frantsay ny vondrona. Aleo lazaina fa tsy kisendrasendra izany, raha tsinjovina ny fisian'ny 85%-n'ny mpiteny frantsay amin'ny ampahany na manontolo eto Afrika amin'ny taona 2050, dia azo heverina fa hivelatra ny tsena.
Manambara ny OIF fa ho 750 tapitrisa ny frankôfôna amin'ny 2050
Filazana ho an'izay sahisahy indrindra, mety hisy fiovana goavana eo amin'ny fampitam-baovao frantsay ao anatin'ny taona vitsivitsy, ary ho amin'ny tsara indrindra izany. Raha jerena ny isan'ny mpiteny frantsay 215 tapitrisa eto an-tany, dia mety hitombo avo telo heny izany any ho any amin'ny taona 2050 any fa hahatratra 750 tapitrisa ny olona hiteny frantsay. Ekena fa napetraky ny OIF (Organisation Internationale de la Francophonie) io fanombanana io tamin'ny 2010, fa manamafy ny fizorana mankany amin'izany ity taona ity. Isa mahafanina mampieritreritra eo amin'ny toerana vaovao misy ny fampitam-baovao frantsay eo amin'ny sehatra manerantany, indrindra fa ho an'i Afrika.
Fitsinjarana ny isan'ny mpiteny – avy amin'ny OIF
Ny 85 %-n'ny mpiteny frantsay no ho tafavory eto Afrika amin'ny 2050 ary izany dia noho ny fitombon'ny isan'ny mponina eto amin'ny kaontinanta. Mety hahazo vahana amin'izany fisondrotana izany ny teny frantsay izay dongiana amin'ny tsy antony, ary hametraka azy ho ao anatin'ny teny ifampiresahana indrindra manerantany, ka hahita indray ny voninahiny. Hampitampim-bava tampoka ireo ratsiratsy teny efa nino azy ho efa ho faty, nefa ankehitriny, efa mitombo sy mihamahazo vahana hatrany ny teny frantsay sy ny fampitam-baovao frantsay. Nisy voka-pikarohana navoakan'ny banky mpamatsy vola iraisampirenena Natixis rahateo mitondra ny lohateny hoe « ny frankôfônia, tsena lehibe azo araraotina ». Navoitran'ny banky ao anaty naotim-panadihadiana fa « miteraka tsena lehibe ho an'ny indostrian'ny fampitam-baovao frantsay izany vinavina izany ». Sehatrasa raisina amin'ny fomba tena matotra satria hametraka tatitra momba ny « la dimension économique de la francophonie » [Refy ara-toekarenan'ny frankôfônia] tsy ho ela amin'ny governemanta [frantsay] i Jacques Attali.
Fiafaran'ny vanim-potoanan'ny ampihimamba
Tsy maintsy lazaina kosa aloha fa hatreto, dia mbola tsy misy fitsinjarana loatra ny fampielezana ny kolontsaina frankôfôna, ny fantsona TV5 monde no mitàna ny ampahany betsaka amin'izany ampihimamba izany amin'ny fahazoany tokantrano 257 tapitrisa manerantany (izay 12 tapitrisa eto Afrika). Nefa amin'ny fampidirana an'i Afrika ao anatin'ny tontolon'ny nomerika, dia tokony hanome lalana ho an'ny fironana vaovao izany fisondrotana izany.
Tahaka ny efa eo am-pametrahan-toerana daholo ny zava-drehetra : fisongadinan'ny saranga antonony, fametrahana fehezam-pantsona (fandaharana) vaovao, fampitaovana ny fotodrafitrasan'ny koriana haingana ho fampielezana ny video sy ny televiziona.
hoy ny tatitry ny vondronasa momba ny frankôfônia avy ao amin'ny UniFrance, fikambanana iray miantsoroka ny fampiroboroboana ny sarimihetsika frantsay eo amin'ny sehatra iraisampirenena.
Fivelarana manintona ny maro noho ny fahakelezan'ny masonkarena amin'ny famokarana (sarimihetsika). Mety ho vitan'ny anarivony euros vitsivitsy isaky ny fizaràna ny andian-tsarimihetsika iray, ary mety hahatratra 40 000 euros raha manao fiteteza-tany any Afrika Atsimo.
Mikasa ny hamoaka ny Africanews ny Euronews amin'ny taona 2015, fantsona iray manavatsava an'i Afrika sy amin'ny fiteny maro miainga avy ao Congo-Brazzaville. Mikasa ny haka toerana ihany koa ny Vivendi miaraka amin'ny fisantaran'andraikitr'i Canal +, amin'ny fananganana fantsona ho an'ny fianakaviana hanolotra ny fampisehoana talenta ho antsoina hoe « Island Africa Talent », amin'ny fifaninanana nahandro afrikana « Starchef », gazetibokin-damaody « Blackamorphe » na amin'ny fifaninanana taovolo. Hiditra ao anatin'ny lalao ihany koa ny vondrona Lagardère amin'ny fanolorana ny fantsony Gulli amin'ny taona 2015. Efa ao anatin'ny fieritreretana rahateo moa ny vondrona amin'ny fiitarana mankany amin'ny fampitam-baovao hafa, indrindra fa amin'ny famoahana onjam-peo vaovao. Tsy latsa-danja amin'izany ny gazety an-tsoratra Eo amin'io lafiny io ihany koa dia maro no mieritreritra fa andalam-pahafatesana ny gazety an-tsoratra. Nefa eo an-dalampahazoana mpamaky vaovao ny teny frantsay. Nanapa-kevitra ny hisantatra zava-baovao amin'ny fananganana tahala aterineto, na tahala finday ihany koa ny gazety frantsay tahaka ny « Le Point », « Le Monde » na ny « Le Figaro » ihany koa.
Ny aloka mainty tokana eo amin'ny fafana ? Tsy ambanin-javatra ny fifaninanana amin'ny shinoa.
Entin'ny vondrona shinoa indray miaraka avokoa ny famatsiam-bola, ny fananganana tambajotra ary ny mpikirakira votoaty, nefa mandeha amin'ny samy mandeha samy mitady kosa ny orinasan'i Enindafy (Frantsa)
hoy ny tsikaritry ny mpanara-maso iray. Na izany aza, efa vonona ny hiady amin'ny fakana anjara toerana hamadihana izany fitomboan'isan'ny mponina izany ho fitomboana ara-toekarena hahazoan'ny Afrikana tombontsoa amin'ny ankapobeny ny Frankôfônia. Vina tsy azo tsinontsinoavina ny fampiofanana ny mpiasa sy ny famoronan'asa.